MyanCare | ကလေးတွေကို ဘယ်လို လိင်အသိပညာပေးကြမလဲ?
ကလေးတွေကို ဘယ်လို လိင်အသိပညာပေးကြမလဲ?
by myatlynn | Aug 13, 2020 | Child Health
ကလေးလေး တွေကို ကလေးတွေပဲလေဆိုပြီး ဖေဖေ၊မေမေတို့က အသိမပေးကြတဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီထဲမှာ လိင်အသိပညာပေးတဲ့ ကိစ္စက ထိပ်ဆုံးကပါ ပါတယ်။ ကလေးတွေ သူ့အရွယ်နဲ့သူ သိသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို သေသေချာချာ ရှင်းပြထားဖို့က လည်း အရေးကြီး လှပါတယ်။
အဲ့ဒါမှလည်း ကလေးလေးတွေ အတွက် မလိုအပ်တဲ့ ဘေးဒုက္ခရန်တွေ ကနေ ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုဘယ်အရွယ်တွေမှာ ဘယ်လို အသိပညာမျိုးပေးသင့်သလဲ ဆိုတာကို လေ့လာ ကြည့်ရအောင်နော်။
—— ဖေဖေမေမေတို့က ဘာတွေသိထားရမလဲ —–
ကလေးတွေကို လိင်ပညာပေးတဲ့အခါ အရွယ်နဲ့လိုက်ပြီးရှင်းပြတတ်ပါစေ။
တစ်ထိုင်တည်း အကုန် သင်ပြစရာမလိုပါဘူး။
ကလေးလေးတွေက ကိုယ်ဝန် ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲလို့ မေးလာရင် အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ မဖြေပါနဲ့။ ဂရုစိုက်ပြီး ဖြေပေးပါ။
အသက် ၁ နှစ်က နေ ၂ နှစ်အရွယ်
အဲ့အရွယ်လေးတွေက ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို နာမည်တွေ ခေါ်တတ်သိတတ်နေပါပြီ။ ၂ နှစ် အရွယ်လေးတွေက ဘယ်သူက ယောက်ျားလေးလဲ ဘယ်သူက မိန်းကလေးလဲ ဆိုတာကို သိနေပါပြီနော်။
သူတို့လေးတွေရဲ့ ငယ်ပါလေး တွေကိုလည်းရှုးရှုးပေါက်ရင်းနဲ့ ဆော့ဆော့ တတ်ကြသေးတယ်နော်။ ဒါတွေက မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ပစ္စည်းလေးတွေ ဖြစ်ပြီး ဖေဖေ မေမေ ကလွဲလို့ ဘယ်သူ့ကို မှ ပြလို့မရဘူးဆိုတာမျိုးကို သေသေချာချာ မှာထားတတ်ဖို့ လိုပါတယ်နော်။
အသက် ၂ နှစ် ကနေ ၄ နှစ်အရွယ်
ဒီအရွယ်လေးတွေက အရမ်းစပ်စုနေပါပြီနော်။ အထူးသဖြင့် မေမေတို့ ညီလေးတွေ ညီမလေးတွေ ထပ်ပြီး ရတဲ့ အချိန်ဖြစ်တတ်လို့ သားသား၊ မီးမီးလေးတွေ က မေးလာတတ်ပြီ ဆိုရင် သေသေချာချာ ရှင်းပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။ “သားသားက ဘယ်ကလာတာလဲ မီးမီးက ဘယ်ကပေါ်လာတာလဲ” စုံလို့။ ဒါတွေကို ဖုံးကွယ်ထားဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ သူ့အရွယ်နဲ့ သူသိသင့် သလောက်ကို ပြောပြပေးပါ။
ဖေဖေ ၊မေမေတို့ နဲ့ ဆေးကုတဲ့သူတွေ(ဒါတောင် ဖေဖေ မေမေတို့ပါမှ) ကလွဲရင် တခြားသူကို လုံး၀ ပေးမထိ ပေးမကိုင်ဖို့ စတင်အသိပေးထားပါ။ ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ အိမ်မှာတောင် ဘယ်အချိန်တွေမှာ မနေရဘူးလဲဆိုတာပါ အသိပေးထားဖို့လိုပါတယ်နော်။
နောက်အပါတ်တွေမှာ ကျောင်းတက်တဲ့ အရွယ် ကလေးငယ်လေးတွေကို ဘယ်လို လိင်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ပညာပေးရမလဲဆိုတာကို ထပ်တင်ပေးမယ်နော်။